Maxaa iska badalay fikirkii xildhibaan Jeesow sideese u arkaa mooshinka cusub? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa iska badalay fikirkii xildhibaan Jeesow sideese u arkaa mooshinka cusub?
Maxaa iska badalay fikirkii xildhibaan Jeesow sideese u arkaa mooshinka cusub?
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo si weyn loogu yaqaanay difaacidda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaan Daahir Jeesow, ayaa u muuqda mid ka walaacsan xiisadda ka dhalatay mooshinka, waxaana uu ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxda sare ee dalka.
Xildhibaanka wuxuu sheegay inay wadaan dadaaladii lagu dhameyn lahaa xiisadda ka dhalatay mooshinka, loona xalin lahaa khilaafka sababay in mooshinkaan uu yimaado iyada oo loo turayo shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu ku baaqay in la furo kulamada baarlamaanka islamarkaana xildhibaanada baarlamaanka ay dood ku kala baxaan.
Xildhibaan Daahir, ayaa waxaa uu xusay in isaga uu dhex dhexaad ka yahay mooshinka laga keenay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo muujineysa inuu mar walbaa dhinac noqon karo
Daahir Jeesow, ayaa lagu xasuustaa sida uu u difaacayay xukuumadda Soomaaliya markii wasaaradda Maaliyadda laga keenay eedeynta la xiriirta Musuq maasuqa, waxaana la ogeyn in hadda uu isbadal ku yimid fikirkiisii iyo inkale.